2019 #NAB शो: उत्पादन स्पॉटलाइट: हाइपरडेक्स चरम 8K HDR द्वारा Blackmagic डिजाइन - NAB प्रसारण बिट द्वारा समाचार, सरकारी प्रसारणकर्ता NAB शो - NAB शो लाइव
घर » Featured » 2019 #NAB शो: उत्पादन स्पॉटलाइट: हाइपरडेक्स चरम 8K HDR द्वारा Blackmagic Design
2019 #NAB शो: उत्पादन स्पॉटलाइट: हाइपरडेक्स चरम 8K HDR द्वारा Blackmagic Design
नयाँ हाइपरडेक एक्स्ट्रीम 8K HDR बाट Blackmagic Design अगली पीढी प्रसारण, प्रत्यक्ष उत्पादन र डिजिटल चिन्ह अनुप्रयोगका लागि उत्तम बहुविध समाधान हुन सेट गरिएको छ। बहुमुखीता को लागी डिजाइन गरिएको, हाइपरडेक एक्स्ट्रीम 8K HDR क्लिप प्लेयर, आईएसओ क्यामेरा रेकर्डर, र / वा मास्टर रेकर्डको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। साथै, एनालग इनपुटहरूले पुरानो भिडियो ट्यापहरू सम्पादन गर्न वा स्ट्रिमिङ सेवामा प्रयोगको लागि इन्जेस्ट गर्न अनुमति दिन्छ। 10G ईथरनेटको साथ डिजाइन गरियो, हाइपरडे एक्स्ट्रीम एक्सएनएमक्सकेक्स एचडीआर, छिटो मिडिया अपलोडको लागि गति बढ्छ। जब फील्ड रेकर्डरको रूपमा प्रयोग गरिन्छ, एकाइ समावेश गर्दछ HDMI, एसडीआई र एनालॉग इनपुटहरू निर्मित इन स्कोपहरू र 3D LUTs सँग!
हाईपर डेक चरम नियंत्रणले प्रयोगकर्ताहरूलाई परम्परागत प्रसारण डेक नियन्त्रणहरू ल्याउँदछ जसले ठूलो शटल घुम्न सक्छ! 12K को लागि दुई मीडिया स्लॉट सहित, संग्रहण को लागि एनालॉग कनेक्शन, यूएसबी-सी बाह्य डिस्क रेकर्डिंग, फ्रंट पैनल स्पीकर र हेडफोन इनपुट प्रयोगकर्ताहरुलाई अधिक परंपरागत नियंत्रण संग प्रदान गर्दछ। साथै, स्टूडियो वा स्थानमा डिजाइन गरिएको इकाईमा एसी र डीसी पावर जडानहरू छन्। RS-8 नियन्त्रण सुविधा गर्न सक्छन् डिजिटल बेटेकम, 1 इंच सी ढाँचा, र Betacam SP, सहित डेक को एक विस्तृत श्रृंखला को नियंत्रित, जो संग्रह को संग्रह र स्वरूपहरु को बीच बदलन को लागि एकदम सही छ।
इकाईले गैर स्टक रेकर्डिङको लागि दोहोरो क्याफेस्ट मिडिया समर्थन कार्डहरू पनि समावेश गर्दछ। H.265 फाइलहरू सानो छन्, त्यसैले रेकर्डिङ मानक क्याफे कार्डमा घडीको लागि धेरै सम्भव छ! H.265 को साथ, तपाईं 498 मिनेटमा 8Kp60 मा 1 टीबी कार्डमा रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ, 1,059p2160 मा 60 मिनेट अल्ट्रा HD र 2,354 मिनेट 1080P59.94 मा 1 टीबी कार्डमा। त्यो 8 घण्टामा 8K र 39 घण्टा भन्दा माथि छ HD! ड्रप गरिएको फ्रेमहरू हटाउन हाइपरडेक एक्सटेम 8K सँग PCIe फ्लैश डिस्कसँग क्यास क्यासका रूपमा प्रयोग गरिने, क्यास स्वचालित रूपमा लिने कुनै पनि सामग्रीले मेटिने र रेकर्ड गर्न मिडिया मिडिया गर्न सक्दैन। स्क्रपहरूमा बनाइएका HDR स्कोपहरूमा पनि एचडीआर ढाँचामा काम गर्दा परिवर्तन हुन्छ! फाइलहरू सही HDR जानकारी त्यसपछि एसडीआई र HDMI आगतहरूले स्वचालित रूपमा HDR भिडियो मानकहरू पत्ता लगाए। स्थिर मेटाडेटा PQ र HLG ढाँचाहरू ST2084 मानक अनुसार संभाला हुन्छन्। उज्ज्वल एलसीडीसँग एक व्यापक रङ्ग गाँट छ त्यसैले पुन: सँधै संभाल गर्न सक्दछ। 2020 र Rec। 709 रङस्थानहरू। HyperDeck Extreme 8K HDR LCD Color Gamut मा निर्मित पनि DCI-P100 ढाँचा को 3% संभाल गर्न सक्छ।
भ्रमणको Blackmagic Design 2019 मा #NABShow बूथ #SL216 प्रदर्शन र अनुप्रयोगहरूको लागि।
बारेमा NAB देखाउनुहोस्
NAB देखाउनुहोस्, आयोजित अप्रिल 6-11th, लास वेगास मा 2019, निर्माण, व्यवस्थापन र सबै प्लेटफार्महरु भर सामग्री को वितरण को कवर दुनिया को सबै भन्दा ठूलो इलेक्ट्रनिक मीडिया शो हो। 103,000 देशहरू र 166 + प्रदर्शकहरूबाट 1,700 सहभागीहरूसँग, NAB देखाउनुहोस् डिजिटल मीडिया र मनोरञ्जनको लागि अन्तिम बजार हो। सृजनदेखि उपभोगबाट बहुविध प्लेटफार्महरू र अनगिनत राष्ट्रवादहरूमा, #NABShow 2019 एक समाधानको लागि घर हो जुन पारंपरिक प्रसारण पार गर्न र नयाँ स्क्रीनमा नयाँ स्क्रिनहरूमा सामग्री डेलिभरी गजल गर्छ।
प्रसारकहरूको राष्ट्रिय संघ अमेरिकाका प्रसारकहरूका लागि प्रमुख वकिल संगठन हो। एनएबीले रेडियो, टेलिभिजन र सार्वजनिक सम्बन्धमा रेडियो र टेलिभिजन रुचिहरू बढाउँछ। अधिवेशन, शिक्षा र नवाचारको माध्यमबाट, एनएबीले सञ्चालकहरूलाई सर्वोच्च समुदायलाई सेवा गर्न, आफ्नो व्यवसायलाई बलियो बनाउन र डिजिटल युगमा नयाँ अवसरहरू गुमाउन सक्षम पार्दछ। अधिक जान्नुहोस् www.nab.org.
प्रसारण बीट 2019 को आधिकारिक प्रसारक हो NAB देखाउनुहोस् लास भेगास र निर्माताको NAB देखाउनुहोस् लाइभ।
मत्तीले निजी क्षेत्रमा काम गरेका छन् र उच्च शिक्षामा बीस वर्ष भन्दा बढीको लागि। उहाँले डिजिटल मिडिया परियोजना व्यवस्थापन, प्रसारण ईन्जिनियरिङ् र मिडिया उत्पादनका क्षेत्रमा माहिर छ। म्याथ डिजिटल डिजिटल उत्पादन उत्पादन, डिजिटल सम्पत्ति प्रबंधन, डिजिटल सिनेमा उत्पादन, र प्रसारण सुविधा एकीकरण मा व्यापक ज्ञान छ। श्री हर्किकिकले सक्रिय रूपमा कला प्रसारण राज्य, किनारा डिजिटल सिनेमा काटेर ग्राहक अचम्मको लागि स्मार्ट अडियो भिजुअल टेक्नोलोजीहरू अनुसन्धान गर्छन् र तपाइँको परामर्श आवश्यकताहरूको लागि उपलब्ध छ।
माट र तिनको परिवार हाल वाशिंगटन, डीसी मेट्रो क्षेत्रमा बस्छ।
मट हर्किक द्वारा नवीनतम पोस्ट (सबै हेर)
2019 #NABShow: उत्पाद स्पॉटलाइट: हाइपरडेक चरम 8K HDR द्वारा Blackmagic Design - अप्रिल 8, 2019
2019 #NABShow: $ 1 बिल र गिनती, स्प्रोककिटको अन्तिम चरणको सुरुवात! - अप्रिल 3, 2019
2019 #NABShow एडोब विशाल क्रिएटिव क्लाउड रिलीजको घोषणा गर्छ! - अप्रिल 3, 2019
2016 NAB देखाउनुहोस् 2016 NAB कार्य मेला देखाउनुहोस् 2016 NAB समाचारहरू देखाउनुहोस् बीट पुरस्कार प्रसारण गर्नुहोस् प्रसारण बीट पत्रिका प्रसारण ईन्जिनियर प्रसारण ईन्जिनियरिङ् प्रसारणकर्ता सम्मेलन प्रसारण सम्मेलन isovideo, viarte, HDR, हल्ला कमी, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-कुलपति, 2015, बिटरेट कमी, एकाग्रता, UHD / 4K / HD, H264 / H265, वरस NAB 2015 NAB 2016 NAB देखाउनुहोस् NAB देख 2016 नब देखाउने क्यारियरहरू NAB लस भेगास देखाउनुहोस् NAB शो पंजीकरण NAB16 nabshow प्रसारणकर्ताहरूको राष्ट्रिय एसोसिएशन	2019-04-08
अघिल्लो: महाकाव्य खेलहरु 'अवास्तविक इन्जिनले तकनीकी एमी जीत्यो र एनएबी 50 मा 2019 प्रसारण पार्टनर प्रस्तुति भन्दा बढीमा प्रदर्शित छ।
अर्को: Frame.io विकासकर्ता प्लेटफार्म र Zapier एकीकरण परिचय